ဘားမားကန်ပိန်းမလေးရှား: October 2009
မေး။ ။ မည်သို့သောအလုပ်သမားသည် မလေးရှားအလုပ်သမားဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့် ရှိသနည်း။
ဖြေ။ ။ လစာငွေရင်းဂစ် ၁၅၀၀အောက် ၀င်ငွေရှိသော အလုပ်သမားအားလုံးခံစားခွင့်ရှိသည်။ အထွေထွေ အလုပ်သမားများအတွက်မူ လစဉ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ပပ်ဖြစ်စေ အကြုံးဝင်သည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားများလည်း အကြုံးဝင်သည်။
မေး။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူ စာချုပ်ဆိုသည်မှာ ဘယ်အရာကို ခေါ်သနည်း။
ဖြေ။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ဆိုသည်မှာ လူတဦးသည် အခြားလူတဦးထံ၌ အလုပ်သမားအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်တွင် နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာအားဖြင့်လည်းကောင်း ၂မျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် မိတ္တူ တစောင်ကို သိမ်းဆည်းထားခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ မလေးရှားအလုပ်သမားဥပဒေ ၁၉၅၅သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အကြုံးဝင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများလည်း အကြုံးဝင်ပါသည်။
မေး။ ။ မလေးရှားအလုပ်သမားဥပဒေ ၁၉၅၅တွင် မည်သို့သော အခွင့်အရေးများကို တွေ့နိုင်ပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားတို့၏ ရပိုင်ခွင့်အားလုံးပါဝင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်အလုပ်ချိန် သတ်မှတ်ချက်၊ အချိန်ပိုအလုပ်နှင့် လုပ်အားခပေးချေမှု၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ အများပြည်သူအားလပ်ရက်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေးခွင့်၊ လစာငွေ စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် အလုပ်သမားထံမှ လစာငွေဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှသာ ဖြတ်တောက်ခွင့်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မီင်္းဖွားခွင့်ကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။
မေး။ ။ အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် အလုပ်ရှင်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော် ၎င်းအနေဖြင့် ၁၉၅၅ အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် အကြုံးဝင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အကြုံးဝင်ပါသည်။ စာချုပ်တွင် မည်သို့သော အခွင့်အရေးများပါသည်ကို သေချာစွာ ကြည့်ရှုပါ။ အလုပ်သမား ဥပဒေသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း ထိုအခွင့်အရေးများ သင်၏စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ မပါရှိခဲ့သော် ဖြည့်စွက်ရေးသားရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ဆိုသည်မှာ ဘာလိုဆိုလိုပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ် သဘောတူညီထားသော သာမန် အလုပ်ချိန်ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်တွင်
၁။ တနေ့လျင် ၈နာရီ သတ်မှတ်ပြီး နားရက်ပါဝင်ပါသည်။
၂။ ၅နာရီဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသော် မိနစ် ၃၀ထက်မနည်းသော နားချိန်ကို ရရှိရမည်။
၃။ တပတ်တွင် ၄၈နာရီ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ရှိသည်။ အပြန်အလှန် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်တွင် တနေ့အလုပ်ချိန် ၉နာရီချုပ်ဆိုနိုင်သော်လည်း တပတ်တွင် ၄၈နာရီထက် မပိုရပါ။
မေး။ ။ အချိန်ပို အလုပ်ချိန်ဆိုသည်မှာ ဘာကို ခေါ်ပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ အချိန်ပို အလုပ်ချိန်ဆိုသည်မှာ ပုံမှန်အလုပ်ချိန် ၈နာရီထက် ကျော်လွန်၍ လုပ်ရသော အလုပ်ချိန်ကို ဆိုလိုပါသည်။
မေး။ ။ အချိန်ပို အလုပ်ချိန်အတွက် လုပ်အားခ မည်မျှရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အချိန်ပိုလုပ်အားခသည် အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ရရှိရမည်။
၁။ သာမာန်အလုပ်လုပ်ရက်အတွက် အချိန်ပို ၁နာရီ လုပ်အားခသည် သာမာန်အလုပ်ချိန် တနာရီလုပ်အားခ၏ တဆခွဲ။
၂။ နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသော် သာမန်အလုပ်ချိန် တနာရီ လုပ်အားခ၏ နှစ်ဆ။
၃။ အများပြည်သူ အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသော် သာမန်အလုပ်ချိန် တနာရီ လုပ်အားခ၏ သုံးဆ ရရှိရမည်။
မေး။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် တလတွင် အချိန်ပို အလုပ်ချိန်နာရီ မည်မျှလုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟု အလုပ်သမား ဥပဒေတွင် ကန့်သတ်ထားမှု ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားတဦးအနေဖြင့် တလလျင် အချိန်ပို ၁၀၄နာရီထက် ကျော်လွန်၍ လုပ်ကိုင်ရန် မလိုပါ။
မေး။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်တွင် လုပ်အားခ ပေးရမည့် အချိန်ကို အသေးစိတ် ဖေါ်ပြ၍ လိုက်နာရန်အချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသလား။
ဖြေ။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်တွင် လုပ်အားခပေးရမည့်အချိန်နှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဖေါ်ပြရမည်။ ၁လထက်ပို၍ ဖေါ်ပြခွင့်မရှိစေရ။ အကယ်၍ မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်မှ ဖေါ်ပြမထားခဲ့သော် လုပ်အားခ ပေးရမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက်ကို ၁လဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် လုပ်အားခကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပေးရမည်နည်း။
ဖြေ။ ။ လုပ်အားခ (ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြတ်တောက်ပြီး) ကို လုပ်အားခပေးရမည့် အချိန်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ၇ ရက်ထက် မကျော်လွန်ပဲ ပေးဆောင်ရမည်။ အကယ်၍ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် နောက်ကျ၍ ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သော် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အလုပ်သမားဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြပြီး လျှောက်ထားနိုင်သည်။
မေး။ ။ ဥပဒေနှင့်အညီ လစာငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ ၎င်းတို့မှာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အလုပ်သမားဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေနှင့် အသက်အာမခံကြေး ပေးဆောင်ရန်အတွက် ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အလုပ်သမားဥပဒေတွင် လွန်ခဲ့သော ၃လက အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်အလုပ်ရှင်ထံမှ ချေးယူထားသော ငွေအား ဖြတ်တောက်ခွင့် ပြုထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ၁လလုပ်အားခထက်ပိုသော ငွေကြေး ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။
မေး။ ။ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးလစာငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်းမှာ ဘယ်လောက်ရှိသနည်း။
ဖြေ။ ။ လစာငွေ ဖြတ်တောက်မည့်လတွင် အလုပ်သမားရရှိခဲ့သော လုပ်အားခ၏ တ၀က်ကိုသာ ဖြတ်တောက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်သမားအနေဖြင့် လစာငွေ၏ တ၀က်ကို ရရှိရမည်။
မေး။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ပုံမှန်ပြီးဆုံးခဲ့သော် မည်သည့်အချိန်တွင် အလုပ်သမားအနေဖြင့် လစာငွေ ရရှိရမည်နည်း။
ဖြေ။ ။ လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ပုံမှန်ပြီးဆုံးရန် တရက်အလိုတွင် အလုပ်သမားအနေဖြင့် သူ၏ လစာငွေကို ရရှိရမည်။
မေး။ ။ ဥပဒေအရ အမျိုးသမီးများ မလုပ်ကိုင်ရန် တားမြစ်ထားသော အလုပ်များရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဥပဒေအရ အမျိုးသမီးများ မလုပ်ကိုင်ရန် တားမြစ်ထားသော အလုပ်အကိုင်များမှာ မြေအောက်တွင် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများကို အထူးတားမြစ်ထားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင်မူ ည ၁၀နာရီမှ နံက် ၅နာရီ အတွင်း လုပ်ရသော လုပ်ငန်းများ အတွက် အလုပ်သမားဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်။
မေး။ ။ ဥပဒေအရ အလားလပ်ရက် မည်မျှ ခံစားခွင့်ရှိသနည်း။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် ၁ပတ်တွင် ၁ရက် အားလပ်ရက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ အလုပ်ရှင်သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကြောင့် အလုပ်သမားကို အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုပါသလား။
ဖြေ။ ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှသာ အလုပ်ရှင်သည် အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်ခိုင်းစေ နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ
၁။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ခဲ့သော်
၂။ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ခဲ့သော်
၃။ သစ်ပင်ပန်းမန်နှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် လက်ငင်းလိုအပ်ချက်
၄။ ကြိုတင်ခန့်မှန်၍ မရနိုင်သော လုပ်ငန်းနှောက်ယှက်မှုများကြောင့် အလုပ်လိုအပ်ခဲ့သော်
တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ အထက်ပါ အချက်များအားလုံးသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးအတွက် မလုပ်မဖြစ် လိုအပ်မှသာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ယင်းအချက်များနှင့် ပါတ်သက်၍ စက်မှုလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၉၆၇တွင် အသေးစိတ် ဖေါ်ပြထားသည်။
မေး။ ။ အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော် လစာငွေ မည်သို့ ခံစားနိုင်ပါ သနည်း။
ဖြေ။ ။ အားလပ်ရက်တွင် လိုအပ်ချက်ကြောင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော် သာမန် ၁ရက် လုပ်အားခကို အပိုဆောင်းငွေအဖြစ် ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ အလုပ်သမားသည် တနှစ်တွင် အများပြည်သူအားလပ်ရက်ကို မည်မျှ ခံစားခွင့် ရှိသနည်း။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် ၁နှစ်တွင် ၁၀ရက်ထက် မနည်းသော အများပြည်သူ အားလပ်ရက် ခံစားခွင့် ရှိသည်။
မေး။ ။ အများပြည်သူ အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော် လစာငွေ မည်သို့ ခံစားနိုင်ပါ သနည်း။
ဖြေ။ ။ အများပြည်သူ အားလပ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော် လုပ်အားခအနေဖြင့် သာမန် ၁ရက် လုပ်အားခအပြင် ထိုလုပ်အားခ၏ ၂ဆကိုပါ တပါတည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ အလုပ်သမားတွင် လစာနှင့်လုပ်သက်ခွင့် မည်မျှ ခံစားနိုင်ပါသည်နည်း။
ဖြေ။ ။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်
- ၂နှစ်အောက်လုပ်ခဲ့သော် ၁နှစ်လျင် ၈ရက်
- ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အတွင်းလုပ်ခဲ့သော် တနှစ်လျင် ၁၂ရက်
- ၅နှစ်နှင့်အထက်လုပ်ခဲ့သော် တနှစ်လျင် ၁၆ရက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
လုပ်သက်ခွင့်တွင် ကျန်းမာရေးကြောင့်ယူခဲ့သော ရှောင်တခင်ခွင့်နှင့် သားဖွားခွင့်များ အကျုံး မ၀င်ပါ။
မေး။ ။ တနှစ်တွင် လစာနှင့် နာမကျန်းခွင့် မည်မျှ ခံစားနိုင်ပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ လစာနှင့် နာမကျန်းခွင့်ကို ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းတွင်
- ၂ နှစ်အောက်လုပ်ခဲ့သော် ၁၄ရက်
- ၂နှစ်နှင့် ၅နှစ်ကြားလုပ်ခဲ့သော် ၁၈ရက်
- ၅နှစ်နှင့်အထက် လုပ်ခဲ့သော် ၂၂ရက်
- လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဆေးရုံတက် ကုသရသော် ၆၀ရက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
မေး။ ။ ကျန်းမာရေးခွင့် လစာနှင့် ပါတ်သက်၍ အလုပ်သမားအနေဖြင့် ခံစားခွင့်မရှိခဲ့သော် မည်သို့မည်ပုံ ခံစားခွင့်ရှိသည်ကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားပါသလား။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးခွင့်နှင့် သားဖွားခွင့် လစာများကို အလုပ်သမားနစ်နာကြေး ဌာနမှ ပေးသော နစ်နာကြေးငွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကာလအပိုင်းအခြားထိ ခံစားခွင့် ရှိသည်။
မေး။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် မလိုက်နာသောကြောင့် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ် မည်သို့ဖေါ်ပြပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ အလုပ်သမားအနေဖြင့် မလိုက်နာသောကြောင့် လုပ်ငန်း သဘောတူစာချုပ် ပျက်ပြယ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် သာမန်အလုပ်လုပ်ရက်တွင် ၂ရက်ဆက်တိုက် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အလုပ်သမားအနေဖြင့် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ခွင့်ရက်အတွင်း အလုပ်ရှင်ထံ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြနိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိသည်။
မေး။ ။ လုပ်ငန်းရှင်ဖက်မှ မလိုက်နာသောကြောင့် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ် မည်သို့ ဖေါ်ပြပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် လုပ်ခလစာငွေအား လုပ်အားခပေးရမည့်အချိန်၏ ၇ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် ပျက်ပြယ်ပါသည်။
မေး။ ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ (နိုင်ငံခြားသား) အလုပ်ခန့်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကို ရပ်ဆဲနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မရမပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ (နိုင်ငံခြားသား) အလုပ်ခန့်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကို ရပ်ဆဲ၍ မရပါ။ (ပိုက်ခွဲ ၆၀M)
မေး။ ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံသားအလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မရပါ။ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မပြုလုပ်ရပါ။ ဥပဒေတွင် လုပ်ငန်းရှင်ကြောင့် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများအနေနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အလုပ်သမားများကို မဖွယ်မရာ ဆက်ဆံခဲ့သော် လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများကို မဖွယ်မရာ ဆက်ဆံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော် အသင်းအဖွဲ့တို၏ သဘောတူညီမှု စည်းကမ်းများကို အလေးထားပြီး အလုပ်သမားရုံးတွင် သွားရောက်တိုင်ကြားနိုင်သည်။
မေး။ ။ အလုပ်သမားလျော့ချရန် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်သူ့ကို အရင် အလုပ်မှ ရပ်ဆိုင်း ရမည်နည်း။
ဖြေ။ ။ သာမန်အားဖြင့်ဆိုသော် နောက်ဆုံးမှ ရောက်ရှိလာသော အလုပ်သမားကို စတင်ရပ်ဆဲ့မည်။ သို့သော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်တွင်မူ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အရင်ဆုံး ရပ်ဆဲခံရမည်။ အလုပ်သမားဥပဒေ အပိုက်ခွဲ ၆၀N တွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းကျဆင်းသောကြောင့် အလုပ်သမားလျော့ချရန် လိုအပ်လာပါက ပြည်တွင်းအလုပ်သမားကို အရင် လျော့ချပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။ ထိုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို စတင်ရပ်ဆဲရမည်။ ထို့နောက် ၎င်းအရေအတွက်နှင့်ညီမျှသော ပြည်တွင်းအလုပ်သမားကို လျော့ချရမည်ဟု အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
မေး။ ။ အလုပ်မှ ရပ်ဆဲခံရသော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ဖြုတ်ခံရသောလည်းကောင်း ဥပဒေအရ မည်သည့် အကာအကွယ်များကို ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
ဖြေ။ ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် စပ်ဆိုင်သော ၁၉၈၀ခုနှစ် ဥပဒေတွင် ယင်းအချက်များကို အသေးစိတ် ရေးသားထားသည်။
ယခုလက်ကမ်းစာစောင်တွင် ပါရှိသော အခြေခံဥပဒေများအားလုံးသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ ၁၉၅၅မှ ဖေါ်ပြချက်များကို အခြေခံ၍ အများနားလည်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ပြဿနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက အလုပ်သမားရုံးသို့ သွားရောက်၍ အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် မလေးရှားရှေ့နေများ ကောင်စီ၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်သော ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့နှင့် မလေးရှား ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ (MTUC) တို့တွင်လည်း အကူအညီများ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ Mr. Charles Hector
Posted by burmacampaignmalaysia at 1:44 AM0comments
ကွာလာလမ်ပူ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီးရှိ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ မြန်မာ ၆ဦး သေဆုံးမှုအတွက် စုပေါင်းကြေငြာချက်
For and on behalf of the 21 organizations/groups listed below:-
For further information, please contact Charles Hector (chef@tm.net.my) or Pranom Somwong (Bee) (p_somwong@yahoo.com) at 019-2371 300, or Tun Tun at 016-2980784
Posted by burmacampaignmalaysia at 10:31 PM0comments
ပီနန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ သေဆုံးသွားသော မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ဦးအတွက် နစ်နာကြေးရရှိရန် ကူညီပေးမှု
Pinang State Government
Subject: :Two legal Burmese migrant workers died at work in bayan lepas
We would like to inform you about two legal Burmese migrant workers who died at work in bayan lepas, pulau pinang on 30th May, 2009. The dead bodies of two workers have been kept in hospital Dato keramat Timur laut, George Town. When they died, they were working at project 112b-5 Jln permatang damar laut,Taman gembira, 11900 bayan lepas, pulau pinang . Their names are San Maung (passport no: A014430) and Saw Htay( passprot no: 890515). Their work permit will be expired on 8th October, 2009. They were working at E T construction Sdn Bhd, No. 1.v, jln berika 2, Bdr baru air itam, ayer itam, 11500 pulau pinang. The employer failed to follow the Malaysia employment Act 1955. The employer wants to do the funeral of two workers quietly and hasn't paid any compensation yet for two dead workers.
Therefore, we have already informed the Pinang Labour Department on 3rd June, 2009 regarding this case The labour department is investigating the case of two dead workers.
We would like to request you to urge the employer to follow the current existing Malaysia labour law and pay the compensation to the families of two dead workers as soon as possible.
We are informing your Excellency on behalf of the families of two dead workers.
Posted by burmacampaignmalaysia at 10:00 PM0comments
မောင်သန်းချစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၍ လျှော်ကြေးရရန် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမှု မှတ်တမ်း
Posted by burmacampaignmalaysia at 9:28 PM0comments
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ပီနန်တွင်သေဆုံးသွားသော မြန်မာနှစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းပြန်စာ
Posted by burmacampaignmalaysia at 9:18 PM0comments
ပီနန်းရှိ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် သေဆုံးသွားသော မြန်မာနှစ်ဦးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ စုံစမ်းပေးပါရန် တောင်းဆိုချက်
For and on behalf of the 127 organizations/ groups listed below:-
Assistance Association for Political Prisoners ( Burma )-AAPP
Association of Indonesian Migrant Workers (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia )
Bar Council Human Rights Committee , Malaysia
Bar Council's Legal Aid Centre , Malaysia
Burma Campaign , Malaysia
Cambodian Women's Crisis Center , Cambodia
Center for Indonesian Migrant Workers - CIMW – Indonesia
Civil Society Committee of LLG Cultural Development Centre (LLGCSC) Columban Center for Advocacy and Outreach ( USA )
Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM - Asia )
Clean Clothes Campaign International Secretariat
Foundation for Education and Development (Formerly, Grassroots HRE ( Burma )
Free Burma Campaign , South Africa
Friends of Burma , Malaysia
HAKAM - National Human Rights Society , Malaysia
HRWG - Indonesia 's NGO Coalition for International Advocacy
Hsinchu Catholic Diocese Migrants and New Immigrants Service Center , Taiwan
Institute for National and Democratic Studies ( INDIES )
International Migrant Foundation-Banglade sh
KAFIN - Saitama , Japan
Labour Resource Centre , Malaysia
National Democratic Party for Human Rights(NDPHR) (exile),SEA Regional Office
Pakistan Rural Workers Social; Welfare Organization
United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-MIGRANTE- HK)
Posted by burmacampaignmalaysia at 8:43 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မတရားသဖြင့် ထပ်မံဖမ်းဆီးမှုအတွက် ကြေငြာချက်
WITHDRAW ABSURD CHARGES AGAINST AUNG SAN SUU KYI
RELEASE IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY ALL POLITICAL PRISONERS IN BURMA
We, the undersigned, are shocked that Aung San Suu Kyi has now been absurdly charged for the offence of breaking the terms of her house arrest, in particular the condition that forbids visitors, after an American man, swam across the lake and entered her house uninvited and refused to leave.
Daw Aung San Suu Kyi and her two assistants were reported to have been charged on 14/5/2009 with breach of detention under Section 22 of the Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements, and their trial is scheduled to begin on Monday (18/5/2009) in an Insein Prison special court set up to handle political dissidents.
American, John William Yettaw, 53, of Falcon, Missouri swam across Inya Lake on the night of May3and left the compound early on the night of May 5, swimmingadistance of about2kilometers. Authorities arrested him later that morning.
In Burma , it is also against the law foraforeigner to stay in the home ofaBurmese citizen overnight without approval from authorities.
Dr. Tin Myo Win, Suu Kyi’s family physician, also will allegedly be charged in connection with Yettaw’s staying in Suu Kyi’s compound overnight. Yettaw himself is also expected to be charged, presumably for violating one of Burma ’s internal security laws.
Aung San Suu Kyi and her two assistants, have been taken from her home and is currently being detained in the infamous Insein Prison since 14/5/2009.
Daw Aung San Suu Kyi, 63, the leader of the National League for Democracy(NLD), has spent 13 of the past 19 years in virtual isolation in her home since the Burmese military junta refused to recognise NLD's landslide victory in the country's last elections in 1990.
The most recent, six-year period of detention is due to end on May 27. The junta’s justification for keeping her locked away under the provisions of this draconian 1975 national security law was to protect the state from "destructive elements". Many speculate that this recent incident was created or being manipulated to discredit Suu Kyi and provide justification for the military government to extend her house arrest again.
We call for the immediate withdrawal of this absurd charge levied against Aung San Suu Kyi, and her2assistants;
We also call for the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and all other political prisoners and prisoners of conscience in Burma ;
We call for ASEAN and ASEAN member governments, including Malaysia, to immediately intervene and urge the government of Burma to respect human rights, and to adhere to the numerous United Nations resolutions, including General Assembly Resolution 49/197 , which, amongst others, “…call on the Government of Myanmar to release unconditionally and immediately the Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi, who is now in her sixth year of detention without trial, and other political leaders and remaining political prisoners…’
We also call on the United Nations(UN), the European Union(EU) and all concerned nations to act for the immediate withdrawal of this absurd charge, to secure the immediate and unconditional release of all political detainees and to restore democracy and human rights to Burma and its peoples.
for and on behalf of the following 22 organisations,
Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM-ASIA )
Migration Working Group (MWG)
National Democratic Party for Human Rights (NDPHR-Exile) Malaysia
National Institute for Electoral Intergrity (NIEI)
Posted by burmacampaignmalaysia at 7:21 AM0comments
ဂျိုဟိုးမှ မြန်မာအလုပ်သမားအလုပ်ချိန်နှင့် လုပ်အားခအတွက်ကူညီပေးမှု
Information Release 06/2009
The factory of UNIBASE SDN BHD is based in Gelang Patah town ship, Johor state. The company is based in Sukudai, Johor. The Nepalese, Bangladeshis, Indonesian and Burmese migrant workers are working in that factory. The factory product is trowel ling works for segment, segment ready, segment casting process etc. the company originally contracted to pay Burmese workers daily wage but the really payment onapiece rate basis. But the workers are not receiving the full rate per piece. Deductions are made before they receive their specified pay per piece. They have to work from 8 am to 10 pm every day. Workers can not get medical leave when they are sick. If they have an accident at the work place, they don’t receive proper treatment. If workers make mistakes, they receive deductions from their salary. The company is not using their pay slips.
The workers built their huts by them self and stay there. The company deducted RM 600 since they arrived at the factory on September 2008 until December 2008. The workers discussed their problem with their section leader Mr. Samsudin, regarding the injustice of wages and other rights but there was no action. On7April 2009, the section leader suspended9Burmese workers.
The workers contacted to the labour department of BCM to help them with their problem. On 16 April 2009, BCM (Ko Harun) went to Johor for detail about their situation. The next day,9Burmese workers and Ko Harun went to the labour office which is under the human resource ministry and the workers reported to labour Officer Nur Afeza Binti Jaafar the abuses and unlawful deductions. The labour office said they would investigate their problem. After that, someone rang Ko Harun hand phone and threatened him and hand up. In the evening, the company management contacted Ko Harun and asked about the workers demands and negotiations. We attach the entire workers name, passport numbers and signatures.
Ko Tun Tun 016-2980 784
Ko Harun 016-2444 167
Posted by burmacampaignmalaysia at 7:11 AM0comments
ဂျိုဟိုးမှ မြန်မာအလုပ်သမားတို့ အခွင့်အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမှု
Information release 05
Local Basic SDN BHD (355228-D) is based in Nusajaya Township, Johor state. Nepalese, Bangladeshis, Indonesians, Vietnamese, Philippines, Sri Lankan and Burmese migrant workers are working in this factory. The factory is doing Machining, surface finishing and assembly of fabricated metal products. The factory is working under ISO 9001 QMS and ISO 14001 EMS but the authorities have not provided working equipment such as safety shoes, safety glasses, gloves, ear muffs etc. If the workers don’t use, they safety equipment, factory management will fine them. The fine is various styles. If the workers make mistakes the supervisors or line leaders will beat, slap, kick or push the workers. The workers find it very difficult to get medical leave. So they work even when they are sick. The workers are working overtime more than 120 hours per month. These are not normal hours and do not include rest days. Most of the workers are not skilled so their work is difficult and dangerous.
The living conditions are poor because up to 35 people are sharingaroom 10x25 square feet in size. Thus, the rooms are over crowded and unhygienic. Water and electricity are paid for by workers. All of the workers must eat at the factory canteen. The authorities do not allow other food. If they don’t obey, they will be fined RM 50. The workers started to complain about the working conditions and turn to the labour department of Burma campaign Malaysia. BCM explained the worker right in Malaysia and also help them to write down their demands. The workers reported to Galang Patah police station, asking them to investigate about the abuses and violations of labour rights.
On 13th March 2009, 10 am, the factory operation manager Mr. Simon Wong and Human resource manager Mr. Foong Kok Leong arrived at the police station to discuss the police report. The factory has over 100 Burmese workers. All of them are not company work permit workers. Some of the workers have been recruited from Ever Green Reliance SDN BHD. During this economic recession, the factory doesn’t have so many orders so 25 workers have been sent back to Ever Green Reliance SDN BHD. Therefore workers can not report to the labour office of human resource ministry for their demands.
But the human resource manager Mr. Foong promised the labour department of BCM and the police that they will not abuse their workers and will follow the current Malaysia labour law in future. This information has been provided by Mr. Charles Hector, The Network Action for Migrant in Malaysia and Ms. Pranom Somwong, Migrant Hub foundation. We also attach the police report and other documents which are required.
Ko Yan Naing Tun 010-2066 085
Posted by burmacampaignmalaysia at 6:57 AM0comments
I myself Tun Tun and Ko Latt went to TENAGANTIA NGO office at 9:30 in the morning and asking for some suggestions for the workers. Ms. Pusenthi P. Manaim , the programme officer replied us that everyone in their office was busy with its annual report. At that moment, they were not able to accept any new case until January 2009, they explained.
Therefore, myself and Ko Latt contacted Mr. Tian Chua for some help. Mr. Tian Chua suggested us to contact Mr. Din from Labour Resource Centre (LRC). Afterwards, at3pm, we visited LRC bringing three Burmese and three Nepalese migrant workers from Johor state together with us. After one hour discussing with Mr. Din regarding the problem between employees and employers, Mr. Din informed Mr. Syed Shahir, President of MTCU. Then Mr. Syed Shahir contacted and requested Mr. Mohan, Chief of MTCU from Johor state to provide necessary assistance for the migrant workers.
Then, the officer from Johor state labour department told us that on 16th December 2008, Mr. Subra Maniam, Minister of Human Resource Ministry hadaschedule to meet with the employer who had problems with our fellow workers. The aim of the meeting was to discuss about Malaysian workers who losing their worker rights, he explained. However, the labour officer said in that meeting, he wasn't sure whether they will discuss about foreign migrant workers' issue. But, the labour told us that if the workers' representatives provide him with necessary information, he will pass that information to the Minister during the meeting.
At the moment, all workers are anxiously waiting for the outcome from that meeting. At the same time, the employer has stopped the workers to use their bank accounts. Previously, workers' wages were normally channeled through their bank accounts. The reason is that we have been informed that the employer was planning to buy the air tickets to send the workers back to their origin of country by using those workers' money. In reality, the employer has to pay for the air tickets from his money for the workers' return. We have heard that it was already arranged to send 40 Burmese migrant workers back to Burma on 16th December 2008 at 8 pm.
Two Burmese and two Nepalese worker representatives went to the labour department in Johor Baruh and tried to inform Mr. Mohan the cases of migrant workers. Mr. Mohan told them to wait and they waited for quiet long time. Finally, the worker representatives tried directly to meet with the minister of Human Resource Ministry. Then, Mr. Abidin Olhman accepted them forabrief meeting and told them that labour officers will come to their factory and settle the problems between employer and employees. At 1 pm, all of the worker representatives went back to their factory.
While the worker representatives were in human resource office, the office manager took their photos as record and said that he has to send the photos to the police. It caused the worker representatives getting worry and they had to hide away from the factory forashort period. About3pm, the officers from labour office arrived at the factory and told the workers that workers' demands will not be met due to the global economic downturn. And for those workers whose work-permits are expired will be sent back to their origin of country, the officers said. Therefore, the officers told the workers to work regularly and save the money to buy the air tickets. After that the labour officers said they will continue to discuss everything details with three worker representatives on 17th December 2008.
At 8 pm, when night shift workers went into the factory, the factory manager told them that for those who didn't work on previous day didn't need to work again and workers went sent back to their hostel. At 11 pm, buses were ready to take those 40 workers to the airport. Some of those 40 workers have to receive their wages from previous working days, but they weren't paid.
Concerning this issue, Burma Campaign Malaysia (BCM) informed Mr. Din in detail. Mr. Din told us he will continue to inform Mr. Abdullah Sani, Member of Parliament from Kuala Langat constituency to be able to take necessary action.
Posted by burmacampaignmalaysia at 6:30 AM0comments
ကမ္ဘာစီးပွါးရေး ကျဆင်းမှုကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ နေရပ်သို့ ပြန်ပို့ခံရမှု
Conflict between employees and employers
In Malaysia, there are more than 500 migrant workers who are currently working in INNO VALUES PRECISION SDN BHD (Co. Reg No. 454311-D) at Pasir Gudang in Johor State.
These workers are mainly from Burma, Nepal and Vietnam. Many Malaysian workers are also working there. This company isaSingapore registered one and it has branch factories in China, Malaysia, Thailand and South Korea.
Majority of foreign workers have the right to work eight hoursaday and one day day-offaweek. The daily wages of the workers is 18.50 RM. The workers earn between 750 and 850 RMamonth including working for extra working time. However, the salary of the workers is not increased, but some have been given just allowance. But the workers enjoy this allowance for only short period of time such as two or three months. On 22nd August 2007, the Burmese worker named Mr. Tin Lin (passport no. 880009) had to cut his thumb shortly after he had the accident in the factory. In that case, the factory authorities did not pay any compensation to him. Besides, according to the regulation of the factory, ifaworker is absent to work foraday, he or she will be barred to work foraweek. When the workers are sick, the clinic of the factory gives the workers the medical treatment, however the workers have no right to have their health benefit.
At the moment, global economic crisis is affecting every part of the world economy. Asaresult, many factories have to reduce its work-force. However, the authorities of this company did not follow the existing labour law of Malaysia while reducing the number of the workers. Instead, that company authorities are putting pressure on the workers to quit the jobs.
At the same time, the manager of human resource department of this factory has been treating the workers in inappropriate manner. Therefore, some workers have informed the local police station on that issue.
Currently, the workers from this factory have demanded factory authorities the following points:
1. To remove the manager of human resource department to other factory located in abroad.
2. Due to the lacking of extra working hours in this month, to stop collecting monthly levy fund. 3. To resume4hour extra working timeaday for the workers.
4. To provide night shift allowance for those workers who work at night.
The local Malaysian workers also demanded similar points to the factory authorities. The factory authorities replied that they will respond the demands of the workers on 15th December 2008. Since 11th December 2008, many foreign workers are now stopping to work in the factory and staying at their residential places which are provided by the factory.
Concerning the above mentioned cases, the workers contacted Burma Campaign Malaysia (BCM) through Lanthit journal to help them. Mr. Tun Tun and Mr. Yan Naing Tun from BCM went to Pasir Gudang in Johor to collect the facts about the conflict between employers and employees on 13th December 2008. The BCM is now consulting with concerned NGOs, Mr. Tian Chua, MP and information Chief of PKR, also advisor of BCM, Mr. Moe Swe of Ywanchioo workers' association and TENAGANITA NGO for further activities.
The copies of police inform sheet and demand paper of the workers which were signed by the workers are attached with this letter.
Mr. Tun Tun 016 2980785 wnyunt@hotmail.com
Mr. Ko Latt 016 3210966 kolatt88@yahoo.com
Mr. Yan Naing Tun 017 3886062 yannaingtun88@yahoo.com
Posted by burmacampaignmalaysia at 6:02 AM0comments
Latest Situation of Khin Zaw and His Eight Other Friends
Around 11:20 am, Ko Harun, Khin Zaw and Kyaw Hlaing Win went to TENAGANITA SDN BHD office. Pusenthi P. Manaim, the programme officer discussed with them how to carry on the case. About3pm, Mr. Andre Shum, the Managing Director of Vm Capital SDN BHD arrived at TENAGANITA office. On behalf of the owner of Sea House Food industry, Andre Shum complained that Khin Zaw and his friends did the wrong way (it meant that Khin Zaw and friends informing the police). In such kind of case, informing the police is not relevant according to the Malaysian law, said Andre. Andre pointed out, according to the Malaysian law, foreign workers have no right to oppose or boycott their employer and if the workers did, they would be deported back to their origin of country.
The root cause of this problem was that the employer forced the employees to work without unlimited working-hours everyday.
Ms Sani has tried to compromise between workers and Mr. Andre Shum, the representative of the employer. Mr. Andre agreed on the condition, if the workers go back to work, the workers will be paid their two months wages which were previously kept as deposit money by the employer. Mr. Andre Shum said that his boss has been facing with financial difficulties at present and consequently paying wages for the workers had to be delayed. If the workers worked with the spirit of family members themselves, there would not be any problems, said Mr. Andre.
After that,aconsensus was reached between Pusenthi P. Manaim and Mr. Andre Shum that next week the factory owner would invite Pusenthi P. Manim and Ko Harun to visit the factory to check the situation of workers in terms of working and living condition.
At present, Khin Zaw and Kyaw Hlaing Win have already returned to the house which is provided by their employer.
During the case of those workers, Ko Huran and Ko Tun Tun provided necessary financial assistance while workers communicating with the NGO.
Posted by burmacampaignmalaysia at 5:49 AM0comments
Khin Zaw and eight others exploited and beaten by employer
Khin Zaw and nine other workers who are currently working at Sweet House Food Industries SDN BHD (620936-K) in Malaysia have been exploited by their employer. All these Burmese workers are holding valid Burmese passports. The following are the names and passport numbers of nine workers.
1. Khin Zaw PP No:A066597
2. Kyaw Hlaing Tun PP No:A089240
3. Myint Oo PP No:A123123
4. Naing Lin PP No:A112441
5. Ngwe Lin PP No:A114081
6. San Lin Maung PP No:A1142443
7. Tun Tun PP No:A112442
8. Aung Win Htut PP No:A123126
9. Hla Saung PP No:A120768
The Burmese workers said that their employer kept their two months wages as deposit money and they are forced to work from7am to2or3am. If the workers arrive at the factory late in the morning, their wages are cut off. There are no days off no break time for the workers and when the workers are fallen asleep during working time, they are beaten by the employer, according to the workers.
Even though the workers tried to compromise with their employer, the employer turn downed their demands. On 8 November 2008, all nine workers didn't go to work and staying at home which has been provided by the employer. The employer arrived at the home on same day, not only denying the demands of the workers, but physically beating the workers. Then, the employer detained the workers in the house and locked it with the new padlock. Later, all nine workers jumped out from the kitchen window and escaped. As soon as they escaped from illegal detention, they went to the Burmese community and asked Ko Harun for some help.
Ko Harun suggested them to inform the police and Khin Zaw went to the local police station by 1:30 pm and opened the case. (Police official paper for opening the case is attached) By 4:30 pm, police officers accompanied with Khin Zaw went to the house and the police tookaphoto of the padlock and the padlock was cut and taken by the police as evidence. The police officer also took more photos in the house as records. Later, police officers and Khin Zaw went together to the factory to see the employer. Then Khin Zaw was told to go back home and the employer was taken to the police station for further questioning.
However, Khin Zaw and Kyaw Khine Win didn't go back home which is provided by the employer, because they were afraid of possible retaliation by the employer. On the same day, about 10 pm, the employer and worker in-charge came to the house asking where were Khin Zaw and Kyaw Khine Win. The other workers said that they didn't where they were and then they were beaten by the work in-charge. The work in-charge isaBurmese citizen. The work in-charge questioned the names and addresses of those who helped them to go to the police station. But the workers replied they didn't know anything about them and Aung Win Htut was beaten again.
Since9November, Khin Zaw and Kyaw Hlaing Htun have been hiding away from the factory. On 10 November, the workers went to see the NGO called TENAGANITA, which is helping for migrant workers. The TENAGANITA accepted the case (case No. MYN/10.11.08/239), however the responsible person from TENAGANITA explained that their lawyers were not ready to travel to the factory at that moment. However, on coming Wednesday, they said that lawyers from TENAGANITA will be going to see the employer and solve the problems within their capacity under given situation.
Ko Htun Htun, mobile:016 2980784
Ko Harron, mobile: 016 6075144
Posted by burmacampaignmalaysia at 4:54 AM0comments
တာလီဘန်၊ မူဂျာဟစ်နှင့် အိုလမာ
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ တာလီဘန်တွေ မပေါ်ပေါက်ခင် မူဂျာဟစ်တွေ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေဟာ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားနဲ့ အလယ် အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ အင်အား ကောင်းခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးဟာ အာရပ် ဘာသာ စကားနှင့် ဘာသာရေးအသိပညာရှင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ အိုလမာ အဖွဲ့ကနေ ခွဲထွက်လာခဲ့တာပါ။ အိုလမာအဖွဲ့များဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်မှစပြီး မူစလင်ကမ္ဘာကို သြဇာလွှမ်းမိုးလာတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးတွေ မထွန်းကားသေးတော့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အများစုဟာ ဘာသာရေးစာပေနဲ့ သမိုင်းများကိုသာ ဖတ်ကြတာကြောင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပဉာတ်များ ( ရှရီအက်တရားဥပဒေ )နှင့် ကျင့်ဝတ်တွေကို နားလည်သဘော ပေါက်တာကြောင့် အိုလမာ အဖွဲ့တွေ လူထုကြားမှာ နေရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာပြောရရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဦးကာ ( ကွယ်လွန် )နှင့် ဒုတိယ ပညာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဒေါက်တာ မောင်ဒီတို့ဟာ ဘာသာရေးစာပေကို ဦးစွာ သင်ယူပြီးမှ ခေတ်ပညာကို သင်ယူခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ စကားချပ်။ ။ ဒေါက်တာမောင်ဒီသည် ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် ဘာသာမဲ့တဦးအဖြစ် ကြေညာကာ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်မှာ ဂျူးတွေကို ပါလက်စတိုင်းဒေသတွင်း ပြန်လည်နေရာချထားမှုက စတင်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး မူစလင်ကမ္ဘာကို အိုလမာတွေက စည်းရုံးခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၅၀ ခန့်ကစပြီး အိုလမာတွေရဲ့ သြဇာဟာ တစတစ ကြီးထွားလာပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူတို့ရဲ့ အာဏာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို နှိမ်နှင်းပါတော့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင် သူတို့အရင် အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ သြဇာ ရှိခဲ့ကြတဲ့ ဆူဖီ ( သူတော်စဉ် )များနှင့် ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ဂူဗိမာန်များကို ဘာသာရေး အပြင်မှ လုပ်ရပ်များအဖြစ် ပြောဆိုပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာ စစ်အစိုးရက မြို့လည်မှ သုဿာန် နေရာများကို ဖယ်ရှားရန်စတင်ချိန်တွင် အိုလမာများက ဖျက်သိမ်းမှုကို ထောက်ခံ ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီသုဿာန်များအတွင်း၌ရှိသော သူတော်စဉ်များနှင့် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ဂူဗိမာန်များ မရှိမှသာ ၎င်းတို့၏ သြဇာများ နောင်အနာဂါတ်တွင် ပိုမိုလွှမ်းမိုးရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုလို စစ်အစိုးရအလိုကြ ဘာသာရေးနှင့် မကိုက်ညီစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာရေးကောင်စီကမူ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကလည်း အဲဒီ အချိန်ကစပြီး သူတို့ကို အသိအမှတ် ပြုခဲ့တယ်။ အရင်အချိန်ကအစ္စလာမ် သာသနာရေးကောင်စီသာလျင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူစလင်တို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရာက ယခုအချိန်မှာတော့ နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။
တချို့သော အိုလမာများဟာ ဘာသာရေးအာဏာအပြင် နိုင်ငံရေးအာဏာတွင်ပါ သူတို့ဝင်ရောက် ချယ်လှယ်နိုင်ရန် ကြိုးစားရာမှ မူဂျာဟစ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့ပြီး စစ်ရေးအရပါ ဆောင်ရွက်ပါ တော့တယ်။ မူဂျဟစ်လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် မအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် ပျောက်ကွယ်လု ဖြစ်နေချိန်တွင်တကမ္ဘာလုံး၌ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုကြောင့် လူအများစုသည် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုများ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရပြီး ဘာသာရေး သွန်သင် ဆုံးမမှုများကို လိုက်နာမှု နည်းပါးလာကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်တွင်းဖြော်ဖြေရေးများတွင်သာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုနည်းပါးလာခြင်း၊ တကိုယ်ရေလွတ်လပ်မှုကို ပိုမိုလက်ခံပြီး အိုလမာများကိုရှောင်ကျဉ်လာခြင်းတို့ကို ဘာသာရေးအရ ထောက်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာများတည်ရှိသော ဆော်ဒီအာရေဗျအပါအ၀င် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် အမေရိကန့်ရဲ့ တပ်များချထားနှင့် စိုးမိုးလာမှုကို ထောက်ပြခြင်း၊ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ဘာသာရေးသွန်သင်ချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာ စေရန် စသည်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီး တာလီဘန်အဖွဲ့တွေကို အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်တို့မှာ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကံအားလျော်စွာ အာဖဂန်မှာ တာလီဘန်တွေ အာဏာရသွားတော့ ဆော်ဒီအာရေးဗျက အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မူစလင်ကမ္ဘာမှာ အိုလမာ တာလီဘန်တို့ကို မည်မျှနေရာပေးနေပြီး အနောက်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကို ဤအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ၉/၁၁ ဖြစ်စဉ် ပြီးမှသာ အမေရိကန်ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျက တာလီဘန်အစိုးရကို အသိမှတ်ပြုမှု ရပ်ဆဲလိုက်တာပါ။
တာလီဘန်တွေကို စစ်ရေးအရ အပြတ်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင် လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့မူစလင်အများစုရဲ့အမြင်မှာ အမေရိကန်နှင့် တခြားအနောက်အုပ်စုဝင် နိုင်ငံများသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြဿနာကို ဘက်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ဒါ့ကြောင့် ပါလက်စတိုင်းတို့ ဒုက္ခရောက်နေရသည်ဆိုပြီး မြင်ကြသဖြင့် သူတို့အားလုံးသည် အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စု ဆန့်ကျင်သူကို လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် လက်ခံပြီး ထောက်ခံကြသည်။ ဒါ့ကြောင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာရေးအခြေခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို လူတွေက အားပေးလာကြ တာပါ။ အဲဒီလူတွေက နောင်မှာ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်လာမှသာ ( ရှရီ အက်တရား ဥပဒေနှင့် အတင်းအကျပ် ထိမ်းချုပ်လာ ) မထောက်ခံကြတော့တာပါ။
ရှရီတရားဥပဒေအကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါသည်။ ဒီကနေ့ ရှရီအက်တရားဥပဒေ ဟု ကြားရုံဖြင့် အင်မတန်ပြင်းထန်သော ဘာသာရေးဥပဒေအဖြစ် အားလုံးကမြင်ကြသည်။ တကယ်တော့ ဤဥပဒေတွင် ယနေ့ခေတ် ဥပဒေများကဲ့သို့ စီရင်ချက်ချမှာရာ၌ တရားသူကြီး၏ ဆီရင်ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ သို့သော်လည်း စီရင်ထုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များဖြစ်ကြသူ အိုလမာများသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို အဆုံးစွန်ထိ အသုံးချခဲ့သောကြောင့် သာ မူစလင်မဟုတ်သောသူများက ရှရီအက်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာပြရလျင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိန်းကလေးငယ်တဦးနှင့် အမျိုးသာငယ်တဦးတို့ ဘာသာရေးအရ တရားဝင် လက်ထပ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီးမှ နှစ်ဘက်သော မိဘများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်၍ ဘာသာရေးအရ တရားသင်လက်ထပ်ရန် ပြုလုပ်သောအချိန်၌ ဘာသာရေးဆရာ ( ဗလီဆရာ ) ( စကားချပ်။ ။ ထိုသူတို့သည် အိုလမာအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ) က အဆိုပါစုံတွဲအား မေးမြန်းမှုတခု ပြုလုပ်ပါသည်။ အသင်တို့နှစ်ဦးသည် ဘာသာရေးအရ တရားဝင်လက်ထပ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပါသလားဟုမေးမြန်းသော် အမှန်အတိုင်း ဖြေဆိုကြရသည်။ အဲဒီအချိန်၌ ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည်ဟုဖြေဆိုပါက ဗလီဆရာမှ ပြစ်ဒဏ်ပေးပါသည်။ ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်မှာ ကျောတရာ၊ ရင်တရာ ရိုက်နှက်၍ အပြစ်ပေးရမည်။ သို့သော်လည်း အသုံးပြုရမည်မှာ ကြိမ်လုံး၊ ၀ါးခြမ်းပြား၊ ကျူရိုး၊ ငှက်ပျောရိုးအစရှိသဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်သူအပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိရာ များသောအားဖြင့် ငှက်ပျောရိုးကဲ့သို့သော ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အရာကိုသာ ရွေးချယ် အသုံးပြုသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ခံရသူအတွက် ပြဿနာမရှိပေ။ သို့သော်လည်း တခြားမူစလင်နိုင်ငံများ၌မူ ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။
ဤနေရာတွင် အခန့်သင့်၍ဗလီဆရာများနှင့်ပက်သတ်ပြီး ရှင်းပြချင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗလီဆရာများကို အစ္စလာမ်ဘုန်းကြီးဟု တခြားဘာသာဝင်များက လွယ်ကူစွာ ခေါ်ပြောနေမှုမှာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ အမှန်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ဘုန်းကြီးမရှိပါ။ သူတို့အားလုံးသည် ဘာသာရေး စာပေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီး ၀တ်ပြုရာတွင် ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက် ပြုရသူများသာလျင် ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် တင်းမာပြင်းထန်သော ဘာသာတရား မဟုတ်ပါ။ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်သော ဘာသာတရားဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်၌ ဘာသာရေးအရ အာဏာရှိကြသော ဘာသာရေးပညာရှင်များ ( အိုလမာ၊ တာလီဘန်) ကြောင့်သာ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ကြောက်စရာဘာသာရေးအဖြစ် အမြင်ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အိုလမာ၊ တာလီဘန်များကို အန်တုနိုင်သော ဘာသာရေးပညာရှင်များ နေရာမရသ၍ ဤပြဿနာများကို ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း ရင်ဆိုင်နေကြရဦးမည်ကို တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။
Posted by burmacampaignmalaysia at 3:47 AM0comments
ကွာလာလမ်ပူ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီးရှိ ထိန်းသိမ်းရေးစခ...
ပီနန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ သေဆုံးသွားသော မြန်မာအလုပ်သ...
မောင်သန်းချစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၍ လေ...
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ပီနန်တွင်သေဆုံးသွားသော မြ...
ပီနန်းရှိ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် သေဆုံးသွားသော မြန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မတရားသဖြင့် ထပ်မံဖမ်းဆီးမှုအတ...
ဂျိုဟိုးမှ မြန်မာအလုပ်သမားအလုပ်ချိန်နှင့် လုပ်အားခ...
ဂျိုဟိုးမှ မြန်မာအလုပ်သမားတို့ အခွင့်အရေးအတွက်ဆောင...
ကမ္ဘာစီးပွါးရေး ကျဆင်းမှုကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ...
တာလီဘန်၊ မူဂျာဟစ်နှင့် အိုလမာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမ...